कृषिप्रधान देशमा प्याज मात्रै महिनामा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको आयात ! « Drishti News – Nepalese News Portal
कृषिप्रधान देशमा प्याज मात्रै महिनामा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको आयात !
१० चैत्र २०७७, मंगलबार 7:37 am
सामान्य कृषि उपजसमेत भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा नेपाली भान्छा आयातमा निर्भर बन्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। कृषि विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल यसलाई डरलाग्दो अवस्था मान्छन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार स्वदेशमा आलु ३ हजार २ सय २५ टन, लसुन ७३ हजार ८ सय ५९ टन र प्याज १ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। मुलुकलाई यस्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएर वैदेशिक व्यापारघाटा न्यून गर्ने नीति सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।